ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 199
“အိပ်မက်မြုံရှင်သန်ခွင့်” လင်းနွေးအိမ်၊ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ ပိတောက်သစ် ဖြစ်တည်နိုင်စွမ်းခမ်းနေလား။ သင်္ကြန်ရေတဖလား ပိတောက်တခက် မေ့အတွက် ပျက်ကွက်တာ ပြက္ခဒိန်အခါခါ။ ငါတော့လေ အကြောသေရင်ခုန်ပွင့် ရနံ့ လွင့် မှိုတက်အိပ်မက် ဂျပ်သေတ္တာနံရံကွက် ချည့်နဲ့ အင်းဆက်များနဲ့ သာ တွန့် ကြေအိပ်ယာမည်းမှာလုံးထွေး တေးဆာသွေးဥတချို့ တော့ ဟန်တကျော့ မာန်နော့လို့အလင်းဖျော့မှာ ခုန်ကဝေ့ဝဲ ‘ညိုမြ’တော့အခေါ်မခံနိုင်ဆိုပဲ။ ငုဝါတွေ သင်းကွဲနွေလွင်ပြင်မှာ မျှော်လင့်ခြင်းများစွာနဲ့သစ်ကုလားအုပ်ဖြစ်နေလား အပြင်းစားဝေဒနာသရုပ်ကို သင်္ခါရ ကဗျာတပုဒ်လို သက်ပြင်းချမှုတ်ထုတ်နေပေမယ့် တချက် တချက် ရက်စက်လေပြန်တေးသွားက တံခါးမဲ့နားဝကို တောင်ပြိုကမ်းပြိုတိုက်ချ မေရေ ငါ့ကို ‘ဂွမ်းတစ’နဲ့‘ရီလီဇင်’တပြား နားလည်ခြင်းနဲ့ ပို့ ပေးပါ။ ညောင်းရွက်တွေ...
ရှင်ကွဲ သေကွဲအရပ်မှာ … ပိတောက်တွေ ပွင့်တဲ့အခါ
ရှင်ကွဲ သေကွဲအရပ်မှာ … ပိတောက်တွေ ပွင့်တဲ့အခါ ကမာပုလဲ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ အမေကလည်း ဗျာ ဒီလို အခါကြီး ရက်ကြီးကျမှ သေရသတဲ့လား …။သင်္ကြန်တဲ့ ကျနော့်မှာ မျက်ရည်နဲ့သာ ပက်ခွင့်ရခဲ့တယ် …။ ။ (ဒီနေ့မှာ သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ ကျနော်လိုက်မပို့နိုင်သော ဈာပနအခမ်းအနား …. သို့) No tags for this post. Related posts No related posts.
မစ်ရှီဂန်မဲဇာ အောင်ဝေး၊ ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ တစ်နှစ်လုံး စိတ်တွေကရေခဲသလိုခဲလို့။ တစ်နေ့လုံး မြူတွေမှိုင်းလို့။ တစ်ညလုံး မိုးတွေသည်းလို့။ တစ်လမ်းလုံး နှင်းတွေဖုံးလို့။ တစ်ကြောလုံး သစ်ရွက်တွေကြွေလို့။ တစ်ချိန်လုံး တိမ်တွေအုံ့လို့။ တစ်ကွင်းလုံး လေပြင်းတွေတိုက်လို့။ တစ်ခေတ်လုံး တစ်ဘ၀လုံး ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ အိမ်လွမ်းစိတ်ကိုပဲ မြက်ရိတ်သလို ရိတ်ရိတ်ပစ်နေရတော့တယ်။ ။ အောင်ဝေး ဧပြီ၁၁– ၂၀၁၃။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ပိတောက် … စကား
ပိတောက် … စကား ကမာပုလဲ ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ကျနော်တို့ ပိတောက်ကိုလွမ်းရင်း ပိတောက်အကြောင်း ကဗျာရေးခဲ့တယ် …။ ကျနော်တို့ဟာ အမေ့ကို လွမ်းရင်း သင်္ကြန်ကို ချစ်ခဲ့ကြသူတွေပေါ့ …။ “ရာသီစာ” လို့ ညွှန်းညွှန်း “ရာသီဆာ” ပဲ ဆိုဆို …။ ကျနော်တို့ ပိတောက်ကို ချစ်ခဲ့တယ် …။ “ဒါ … ငှက်ဖျားငန်းဖမ်းဇာတ်ပဲ ” တောင်ပေါ်မှာ ကျွန်းတွေ အပွင့်ပွင့်ချိန် အမေ့အိမ်ကို … ကျနော်တို့ “ တူးပို့ … တူးပို့ ” နဲ့ လွမ်းခဲ့တယ် …။ ပိတောက်ပွင့်ကလေးတွေ ဖင်ဆိတ်ပြီး သူ့အစီးနဲ့ … ကျနော်တို့ နဖူး …...
ငြိမ်းချမ်းအေး ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၃ တကယ်တော့.. တိုင်းပြည်မှာ လူမျိုး/ဘာသာ/အသားအရောင်/လိင် ခွဲခြားပြီး ပြောနေဖို့ မလိုဘူး။ တကယ်တမ်း.. တိုင်းပြည်မှာ ခွဲခြားမြင်တတ်ပြီး ပြောရမှာက ‘ရှိသူများ’ နဲ့ ‘မရှိသူများ’ အရေး ဖြစ်တယ်။ ‘Haves’ Vs. ‘Have-nots’ ကွာခြားချက်ကိုပဲ အသံထွက်ရမယ်..။ ‘ရှိသူများ’ နဲ့ ‘မရှိသူများ’..။ အာဏာရှိသူများ နဲ့ အာဏာမဲ့နေသူများ..။ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူများ နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် မဲ့နေသူများ..။ ‘စံစား’ နေရသူများ နဲ့ ‘ခံစား’ နေရသူများ..။ ဖိနှိပ်နေသူများ နဲ့ အဖိနှိပ်ခံများ..။ အခွင့်အရေး ရနေသူများ နဲ့ အခွင့်အရေး ဆုံးနေသူများ..။ ထိုင်ရာမထ လိုတ ရနေသူများ နဲ့ ဖောင်စီးရင်း ရေငတ်နေသူများ..။...
ကျိန်စာသင့် ပျံသန်းနေဆဲ … ငှက်
ကမာပုလဲ ဧပြီ ၆၊ ၂၀၁၃ ငှက် တကောင်ဖြစ်တယ် ငှက်တွေထဲက ငှက်တကောင်ဖြစ်တယ် …။ ဒီငှက်ဟာ ကမ္ဘာပတ်လာတဲ့ ငှက်ဖြစ်တယ် … ကမ္ဘာပတ်လာတော့ ကမ္ဘာ့ အနိဌာရုံတွေ သွေးပျက် နာကျည်းဖွယ် အဖြစ်သနစ်တွေ သူ့မျက်ဝန်းထဲ စွဲထင် ကပ်ပါလာခဲ့တယ် …။ ဒီငှက်ဟာ ဘရွတ်ကလင်း တံတားပေါ်ဖြတ်ပျံတော့ ဒီငှက်ဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကို ဖြတ်ပျံခဲ့ ဒီငှက်ဟာ ကျဆုံးနေတဲ့ ပါရီမြို့ကြီးပေါ် ဖြတ်ပျံတော့ ဒီငှက်ဟာ ဟီရိုရှီးမား မြို့ပျက်ကြီးပေါ် ဖြတ်ပျံငေးမော ဒီငှက်ဟာ ရတနာ ဂီရိကို ဖြတ်ပျံခဲ့တော့ ဒီငှက်ဟာ သေမင်းတမန် မီးရထားသံလမ်းပေါ် တထောက်နားခဲ့။ ဒီငှက်ဟာ နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီးရဲ့ သွားကြားထိုးတံ ဒီငှက်ဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့...
ကမာပုလဲ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၃ “တကယ်တော့ ဒို့ခေတ်ဟာ အမှောင်ခေတ်ကြီးပါ” (ဗားတော့ဗရက်) အမှောင်ထဲမှာ လူလုံးမကွဲဘူး … အမှောင်ဆိုတာ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ စရဏတရား အမှောင်ထဲမှာ မျက်ရည်ကို မမြင်ရဘူးလေ …။ အမှောင်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းအေးမြ ကရုဏာအပြုံးတွေ အမှောင်ထဲမှာ ကောက်ကျစ်ရက်စက် ရယ်မောသံတွေလား အမှောင်ထဲမှာ …။ အမှောင်ထဲမှာ ငြိမ်သက်စွာ အမှောင်ထဲမှာ စူးစူးစိုက်စိုက်ခံစား အမှောင်ထဲမှာ အရောင်တွေကို ရှာဖွေ အမှောင်ထဲမှာ လူဟာ လိမ်လို့ညာလို့မရ အမှောင်ထဲမှာ … ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဟာ သစ္စာတရားနဲ့ ယှဉ်တွဲနေ … အမှောင်ထဲမှာ … ။ အမှောင်ထဲမှာ သဘာဝအလင်းရောင်ရှိတယ် အမှောင်ထဲမှာ ကြယ်စင်တွေ ရှင်သန်လင်းလက် အမှောင်ထဲမှာ လူတိုင်း လူတိုင်း ကိုယ့်အတ္တ...
Page 199 of 235«1...197198199200201...235»